BUDDHIST TERMS' Dictionary: ORDER OF BHIKKHUNIS - ဘိက္ခုနီ
ORDER OF BHIKKHUNIS - ဘိက္ခုနီ
ORDER OF BHIKKHUNIS Bhikkhuni
ဘိက္ခုနီ - ဘိက္ခုနီမ၊ ရဟန်းမ။
ဘိက္ခုနီသာသနာသည် မိထွေးတော် မဟာပဇာပတိ ဂေါတမီ၏ စွမ်းဆောင်မှုကို အခြေတည်၍ အရှင်အာနန္ဒာ၏ လျှောက်ထားတောင်းပန်မှုကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဖြစ်သည်။ ဘိက္ခုနီ ခေါ် ရဟန်းမ များသည် ရဟန်းယောက်ျားများထက်ပို၍ သိက္ခာပုဒ် (၃၁၁)ပုဒ်ကို တင်းကျပ်စွာ လိုက်နာစောင့်ထိန်းကြရသည်။ ဘိက္ခုနီရဟန်းမ ပြုလုပ်သောအခါ ဘိက္ခု ဘိက္ခုနီ နှစ်ဖက်လုံးထံ သြ၀ါဒ ခံယူကြရသည်။
ဘိက္ခုနီသာသနာ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြင့် အမျိုးကောင်းသမီးလေးများသည် အမျိုးသားများနည်းတူ တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရရှိခဲ့ကြသည်။ ရဟန်းမပြုလုပ်၍ မဂ်ဖိုလ်အသီးအပွင့်များကို အမျိုးသမီးများ ခံစားကြရ၏။ ဘုရားရှင်သာသနာ နှစ်ပေါင်း (၆၀၀)ကျော်ခန့်အချိန်တွင် ဘိက္ခုနီသာသနာ ကွယ်ပျောက်ပြီးနောက် ရဟန်းမများ၏ နည်းကိုမှီ၍ အမျိုးသမီးများသည် ၈-ပါး၊ ၁၀-ပါးသီလကို စောင့်ထိန်းကာ သာသနာနွယ်ဝင် သီလရှင်အဖြစ် ပြုလုပ်လာကြ၏။ ထိုအခါ အမျိုးသမီးကလေးများသည် အမျိုးသားများနည်းတူ ပရိယတ် ပဋိပတ်တို့ကို ထမ်းဆောင်ခွင့်ကို ရရှိခဲ့ကြပြန်၏။
The order of bhikkhunῑs owed its appearance to Mahᾱpajᾱpati Gotamῑ, the Buddha’s aunt and stepmother and also to the venerable Ᾱnandᾱ who sought permission from the Buddha to set up the bhikkhuni order. Bhikkhunῑs had to observe 311 disciplinary rules, more than those for the male counterparts. With the arising of the order of bhikkhunῑs, daughters of decent families obtained the same rights as those obtained by bhikkhus. They enjoyed the results of the Path and Fruition. Their order, however, ceased to exist after six centuries of the Buddha’s Teaching. Later on womanfolk became nuns by keeping the eight or ten precepts, and by adapting the rules of the bhikkhunῑs to their requirements. Then they came to regain the opportunities to shoulder the responsibilities of learning and practices as men do.